The Ab Presents Nepal » त्यो भिडियोलाई मैले के माटो मुनि दबाउनु पर्थ्यो कि लुकाउन पर्थ्यो ?
अहिले चर्चामा रहेको शालिकराम पुडासैनी मृ*त्यु प्रकरण अनुसन्धानका क्रममा रहेको छ । अहिले यस घटनामा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने, युवराज कँडेल र नर्स अस्मिता कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ ।प्रेस काउन्सिल नेपालका कार्यवहाक अध्यक्ष एवं जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले बाहिर ल्याएको भिडियोको आधारमा उनीहरु प*क्रा*उ परेका हुन्।पुडासैनीले जीवनत्या*ग्नु भन्दा पहिले खिचेको भिडियोमा यी व्यक्तिहरुको नाम लिएर आफुलाई जीवनत्याग्न बाध्य पारिएको भने पछि तीजना पक्राउ परेका हुन्। यो बीचमा अहिले उनै श्रेष्ठले न्यूज २४ टेलिभिजनको सिधा कुरा जनतासँगका प्रस्तोत रवि लामिछानेलाई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्न शुभकामना दिएका छन्’ ।
उनी भन्छन्,यसमा मैले के गल्ति गरे र ?किशोरले कुराकानीमा भने,मैले के त्यो भिडियोलाई माटो मुनि दबाउनु पर्थ्यो कि लुकाउन पर्थ्यो ? खास के गर्न पर्थ्यो ?मैले कुनै ईडीट गरेको छैन जो आएपनि मेरो मोबाईलबाट झिकेर दिनसक्छु ।भिडियो सत्य हो कि झुटो हो भन्ने अनुसन्धानको विषय हो। मेरो काम भनेको आएको समाचारलाई बाहिर ल्याउनु हो र मैले त्यहि गरेको हु तर अहिले मलाई दोष देखाउन तिर लागेको भिड देख्दा छक्क परे ।अहिले पक्राउ परेकाहरुको बयान लिने काम भइरहेको छ’।
पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको रहस्यमय नि*ध*नका सम्बन्धमा छानबिनका लागि रविसहित तीनजनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि श्रेष्ठमाथि विभिन्न आशंका र आरोप लाग्न थालेको थियो । श्रेष्ठले रविलाई फसाउन खोजेको लगायतका आरोप लाग्न थालेपछि एक युट्यब च्यानलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर आफ्ना धारण सार्वजनिक गरेका हुन् । केही महिनाअघि श्रेष्ठ र रविबीच टकराव चलेको थियो’।
तर, आफूले रविप्रति कुनै रि*स नसाँधेको श्रेष्ठको दाबी छ । बरु आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गर्दै उनले रवि दोषी हुन् वा निर्दोष त्यो कानुनले भन्ने बताए । सोही क्रममा श्रेष्ठले रविलाई चुनाव जितेर प्रधानमन्त्री बन्न शुभकामना दिए । किशोर श्रेष्ठका अनुसार भिडियो आफूलाई पुडासैनीको परिवारले दिएको र पत्रकारको नाताले त्यो भिडियो आफुले समाचारको रुपमा बाहिर ल्याएका हुन्।sidhanepal.com bata